Horonantsary mamoafady :: Tratra ilay lehilahy namoaka sarin-jazakely • AoRaha
Sarona avy amin’ny fahaiza-manaon’ireo teknisiana amin’ny tambajotran-tserasera avy amin’ny sampana misahana ny heloka bevava an’ny zandarimaria any Toamasina ny lehilahy iray namoaka horonantsarin’ankizy roa ao anatina horonantsary mamoafady tamin’ny tambajotra sosialy « Facebook », afak’omaly. Niaiky ny heloka vitany ilay lehilahy.
Niely tamin’ny tambajotran-tserasera n y horonantsary ahitana ankizy roa manao fihetsika mamoafady amin’ny lehilahy lehibe iray. Tsy teto Madagasikara no nandraiketana ny horonantsary raha ny fahitana ireo mpilalao. Tsy mahalala ny loza ataony ireo ankizy fa mihevitra ho toy ny kilalao ny fihetsika nampanaovina azy. Naparitak’iry lehilahy monina any Toamasina iry tamin’ny « facebook » anefa io horonantsary mamoafady io. Nampiasain’ireo zandary ny paikady nahafantarana azy ka izao niafara tamin’ny fisamborana azy izao.
« Natao ny fomba hisamborana azy rehefa fantatra ilay lehilahy. Nisy ny vela-pandrika natao taminy ka teo Valpinson ampitan’ny biraon’ny Melissa izy no nosamborina. Voatazona ato aminay izy amin’izao fotoana izao », hoy ny fanazavan’ireo zandary misahana ny heloka bevava any Toamasina.
Amin’ny zoma no voalaza fa hanolorana an’itsy lehilahy itsy eo anoloan’ny Fampanoavana any Toamasina ihany. Manamarika ireo zandary manao famotorana fa « mitovy ny sazin’ny olona nanao heloka amin’itony tambajotran-tserasera itony sy ireo olona manaparitaka izany. Antso no atao mba tsy hamoahana tranga fandikan-keloka raha tsy te ho voarohirohy toy izao », hoy izy ireo.